30+ အခမဲ့ Android App များတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူ Android App များကိုဖန်တီးရန်ခြေလှမ်းများ | WikiWon
30+ အခမဲ့ Android App များတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူ Android App များကိုဖန်တီးရန်ခြေလှမ်းများ
mujeer ဧပြီလ 18, 2017 8 မှတ်ချက်များ
အန်းဒရွိုက် app ကိုကမ်ဘာပျေါတှငျသုံးနေသည့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရေပမ်းအစားဆုံးဖြစ်ပါတယ်, လူကြိုက်များနှင့်ဟာ android app ကို အသုံးပြု. အချမ်းသာဆုံးလူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်သူ၏အသက်တာနှင့်စီးပွားရေးအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး app ကိုလုပ်ချင်ခဲ့တယ်, ယနေ့ငါဘယ်လိုတစ်ခုက Android App ကိုဖန်တီးဖို့အတွက်သင့်ကိုဝေမျှ, ယင်းဟာ android app ကိုဝယ်ခြင်းငှါအချို့ပုဂ္ဂိုလ်များစေရန်နှင့်အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်အလွန်စျေးနှုန်းတက်သွားလေ၏မဟုတ်ပါ, ဘယ်သူ့ကိုမှပုဟာ android app ကိုမှတ်ချက်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တချို့အထုပ်သင့်လုပ်ငန်းကိုကြိုက်မှပြသထားပါသည်, ငါအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်.
အန်းဒရွိုက် App ကိုသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုကြိုက်မှသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုလိုအပ်ကြောင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးများကဲ့သို့, လူတစ်ဦးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုပြသထားတယ်လို,
ငါအချို့ဟာ android app ကိုရှေးခယျြမပြုခဲ့, ငါအကြံပေးချက်များဖန်တီးမျှဝေပေးနိုင်တယ်ဒီအချိန်, နှင့်လှည့်ကွက်.
အခုတော့မဆိုနိုင်တဲ့ coding များနှင့်ပြုမိ app ကိုမပါဘဲတစ်ဦးအခမဲ့မိုဘိုင်း android app ကိုဖန်တီးပါ, ခြေလှမ်းကပြပွဲခြေလှမ်းကဲ့သို့သင်၏လျှောက်လွှာနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုဝေမျှဖို့မဆိုဆော့ဖျဝဲ, ဒီ website မှာလိုပဲအွန်လိုင်းပြသ android app ကို. ဒါဟာအများဆုံးပြသ 10 ကျန်ရစ်ရက်ပေါင်း Playstore အတွက်ပြသထားတယ်အဲဒီပရိုဂရမ်ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ,
1 ကျနော်တို့လိုအပ် 30+ အဆင့်ဝေမျှမယ်အားဖြင့်သင်တို့ကို Step
2 ဤတွင်ကို Android App ကိုအကြောင်းကိုအချို့သောသတင်းအချက်အလက်များပိုမိုများမှာ
ကျနော်တို့လိုအပ် 30+ အဆင့်ဝေမျှမယ်အားဖြင့်သင်တို့ကို Step
သငျသညျမိုဘိုင်းရာအရပျ၏စျေးကွက်မှာတက်လာမယ့် app ပါလျှင် Ideation,
Android app software ကိုကိုသွားပါ,
website ကိုအွန်လိုင်းထုတ်လုပ်သူ Get
သင်၏ android app များကဲ့သို့မှာ wireframe ၏မဲနှိုက် Add, သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကဲ့သို့လျှောက်လွှာကမေ့လျော့မထားဘူး,
အဆိုပါ template ကိုရွေးချယ်ဖို့ Go,
သင့်ရဲ့ IDE ရွေးချယ်ခြင်း
ကတက် setting ကိုသွားပါ
အခြေခံ JAVA သင်ယူခြင်းကိုသွားပါ, PHP ကိုအန်းဒရွိုက် App ကိုလျှောက်လွှာကြောင့်.
သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကဲ့သို့အချို့သော pics အောင် Photoshop ကိုသွားပါ,
သငျသညျပြီးသားယခု add ဖို့သင့်စီးပွားရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးယင်း၏ကောင်းသောသွားလာရင်းရန်အဆင်အပြင်ရာ၌ခန့်ထားပြီဘူးဆိုရင်.
ပိုပြီးအဆင့်မြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအကောင်အထည်ဖော် code ကိုရေးသားခြင်း, အခြို့သောအပိုအရောင်သွားပြီးအချို့ပိုပြီးသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သောပြသရန် add,
Google Play စတိုး၌သင်တို့၏ app ကိုထုတ်ဝြေခင်းကိုသွားပါ.
ဤသည်မှာဟာ android app ကိုထုတ်လုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုအတိုင်းအတာကိုရောက်ရှိဖို့နဲ့သူတို့ကမည်သည့်ပြဿနာမပါဘဲပြုပြင်မွမ်းမံ / သူတို့ကိုယ်သူတို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်သော applications များနှင့်အတူသူတို့ကိုပေးအောင်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနှင့်အတူ created နှင့်ဖြန့်ချိခဲ့သည်.7ခြေလှမ်းတဆင့်ရှိပါတယ်9ပါဝငျမညျ, သင့်ရဲ့ android ကြှနျုပျတို့၏ website လမ်းညွှန်ကိုသွား Play စတိုးများတွင်မပြခဲ့ဘူးပါလျှင်ကျွန်မအထောကျအကူဖွစျလိမျ့မညျ, ထိုကွောငျ့ဟာ android app ကိုသင့်ရဲ့ဆက်စပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးသတင်းအချက်အလက်စစ်ဆေးသွားနှင့်အလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌သတင်းအချက်အလက်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိပါပြသ
သင့်ရဲ့ android ကြှနျုပျတို့၏ website လမ်းညွှန်ကိုသွား Play စတိုးများတွင်မပြခဲ့ဘူးပါလျှင်ကျွန်မအထောကျအကူဖွစျလိမျ့မညျ, ထိုကွောငျ့ဟာ android app ကိုသင့်ရဲ့ဆက်စပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးသတင်းအချက်အလက်စစ်ဆေးသွားနှင့်အလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌သတင်းအချက်အလက်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိပါပြသ
ဤတွင်ကို Android App ကိုအကြောင်းကိုအချို့သောသတင်းအချက်အလက်များပိုမိုများမှာ
သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အလုပ်လုပ်မယ့်လအနည်းငယ်အတွင်းအွန်လိုင်းဟာ android app ကိုပေမယ့်အွန်လိုင်း app ကိုဖန်တီးပါမှကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်ယင်း၏ပြဿနာကုမ္ပဏီသူ့ကိုပေးမပေးနိုငျသောကွောငျ့ပြသတော့မှ.
တစ်စုံတစ်ယောက်အွန်လိုင်း app ကိုဖန်တီးရန်အလွန်လွယ်ကူစွာဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်င်မဟုတ်သလိုသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သောဘာလို့လဲဆိုတော့အွန်လိုင်း app ကိုသွားပြီးက်ဘ်ဆိုက်ထို့နောက်ငါသည်သင်တို့ကိုတူညီတဲ့ဟာ android app ကိုပေးခွငျးဖွငျ့သငျသညျအခြို့သောအထုပ်များကို, သင်အထုပ်ကိုဝယ်ခြင်းနှင့်အတူတူပင်ကိုပြသပေမယ့်သူ့ရဲ့ website ကိုဖွင့်အွန်လိုင်းပြနိုင်တဲ့ coding လူကြိုက်များကမ္ဘာကြီးကိုကြောင့်ပြသနှင့်များစွာသော website ကိုပစ်မှတ်မရနိုင်မယ်ဆိုရင်. ထို့ကြောင့်အလုပ်ကိုပြသနှင့် android အတိုင်းလိုက်နာ, ဤအချိန်ကမ္ဘာကြီးသုံးပြီး2သန်းကဲ့သို့ android ဂိမ်းကိုအသုံးပြုပြီးလူရဲ့နဲ့လူများစွာ,
တစ်ဦးဟာ android ဂိမ်းနဲ့တူဘယ်သူ့ကိုမှကြောင်းဝေမျှဖို့လိုလျှင်, သင်သည်သင်၏ဂိမ်း level ကိုဝေမျှလိုလျှင် facebook ကိုအများအပြားဟာ android apps များမှာပြီးပြည့်စုံ facebook အတွက်ဝေစုကျေးဇူးပြုပြီးပေးနှင့်အသွားအလာလိမ့်မည်တူညီတဲ့ဟာ android app ကိုဂိမ်း play စတိုးမှာထိပ်ဆုံးသွားရ?
များစွာသော website တွေမှာ android app ကိုလုပ်အွန်လိုင်းများကို
လူမျိုးများ coding ဟာ ​​android app ကိုဖန်တီး
အလွယ်တကူ install နှင့်အတူသုံးစွဲဖို့နှင့်ဖယ်ရှားရန်
အန်းဒရွိုက် app ကိုဂိမ်းပေး
သငျသညျ play စတိုးမှာ google ခွင့်ပြုချက်မှာသင့်ရဲ့ App ကိုထုတ်ဝေခြင်းမပြုမီ
Android App ကိုအကောင်းဆုံးကင်မရာကိုပေး
အန်းဒရွိုက် App ကိုအွန်လိုင်းလုပ်ပိုက်ဆံပေး
အန်းဒရွိုက် App ကိုသင့်ရဲ့ website မှာနှုန်းအဖြစ် Make
အလွယ်တကူဟာ android app ကိုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို
အသုံးပြုသူခဲ့သည် Rating5(1 မဲပေး)
Android App များ, မိုဘိုင်းဖုန်း	android apps development, android apps download apk, android apps games, android apps reddit, android apps store, free android apps, mobile apps download, ထိပ်တန်း 30 android apps များ	bookmark
ယခင်အပိုဒ် How to Create Verified PayPal Account in Pakistan 2017 Tips
next ကိုပုဒ်မ မြေအောက်ရထား Surfers ထိပ်တန်းလူကြိုက်အများဆုံးအခမဲ့အန်းဒရွိုက်ဂိမ်း